HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari44 Malatya
Wadada Malatya Waxay la Noqon doontaa Siyaabo Kale
Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya, wareegii koowaad ee mashruuca balaca 25 mitir oo balaaran ayaa lagu xiri doonaa wadada Sivas laga bilaabo isgoyska saldhiga oo la dhameystiray. Marxaladda koowaad ee shaqadii ugu dambeysay ee Dawladda Hoose ee Magaaladda waxaa ay biloowday shaqo-dooneyaal, maalmo kooban [More ...]
Gawaarida Steam waxaa lagu muujiyey Saldhigga Tareenka Malatya ee Sugitaanka booqdayaasha
Gawaarida Steam waxaa lagu muujiyey Saldhigga Tareenka Malatya ee Sugida Soo Booqdeyaasha; Gawaarida Steam ee howlgab noqday ka dib markii ay sanado badan ka shaqeynayeen TCDD waxay sugayaan soo-booqdeyaasha. Madxafka wadada tareenka lagu diyaariyey ee ku yaal aagga Saldhigga Malatya [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaaladu Malatya waxay ku hawlantahay isbadal, isbadal iyo dib u cusbooneysiin shaqooyin ah oo ku saabsan Dahabka loo yaqaan 'Golden Apricot Boulevard', kaasoo ah boulevardka ugu weyn Malatya, kaasoo isku xira Tecde iyo Isgoyska Maşti. 3.3-kiiloo mitir, 50 mitir ballaaran oo loo yaqaan 'Golden Apricot Boulevard' [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya ayaa dhammeystirtay ballaarintii iyo howlihii wadooyinka ee Battalgazi Atabey İskele. Ka sokow howlaha cusub ee wadooyinka, Dowladda Hoose ee Old Malatya, oo dib u dayactiraysa wadooyinka hada jira kana dhigaysa kuwo la jaan qaadaya heerarka, [More ...]
Wadooyinka Kale ee Wadooyinka ee Wadada Malatya ee Wadada
Duqa Magaalada Malatya Selahattin Gürkan, Cevatpaşa Neighborhood (oo ka danbeeya Suuqa MACRO) ka dib la wareegida iyo wadooyinka ayaa sii wada baaritaan ku saabsan duminta. Duqa Magaalada Caasumada ah Selahattin Gürkan [More ...]